Mashiinka Gaarka ah ee koollo hawada 3D - Shiinaha Kingswel Makiinado
3D Air Naasaha Machine
Qalabaysan nidaamka madaxa dhinta ejection isku xig xiga (SECO), model tani waxay u oggolaanaysaa alaabta si ay u gaaraan a "jilicsan - adag - jilicsan" qaab-dhismeedka. Isticmaalka laba nooc oo ah qalabka isagoo sifooyin kala duwan oo soo saari kartaa tube hawo-waxqabadka sare ah. gogo 'tube Waa wax fudud in kala furfuraan, oo uu leeyahay shoog-qaadashada, yaraanshaha iyo ballaarinta kulaylka iyo qaababka kale.
Qalabaysan qalab "vacuum" jar parison iin, waxaa ku gaari kartaa wax soo saarka ee lacagta ugu yar ee flash on sheyga iyo sidaas badbaadin qalabka. dusha hoose wax soo saarka ee waa siman, oo aad bay u weynaan iska caabin cadaadis of tuubooyinka ah.
Qalabaysan axial iyo radial (ee X iyo Y tilmaamaha) qalabka gacanta oo dhumucdiisuna waxay derbiga, waxaa ku hubin karnaa oo dhumucdiisuna waxay derbiga uniform of alaabta, gaar ahaan qaybta la dhaf-yar oo alaabta.
waqti wareegga qallalan
qalab ku tirtirayaan Model of unit ku tirtirayaan
size Platen (* H L)
Stroke ee ku tirtirayaan caaryada
Speed ​​of xiritaanka caaryada
Stroke dhaqdhaqaaqa platen caaryada
madaxa isku xigxiga dhinta duro Min. biiyaha
awood kululaynta on madaxa dhinta
Points of jihada axial
Points of jihada X-radial
Points of jihada Y-radial
jar vacuum Max. qulquli
Max. awoodda nuugid
Nuugid sixitaanka mugga
Framework stroke qaadista
awood motor bamka Oil
Howlsocodsiinta awood motor
isticmaalka hawada tilmaantay Tifaftirayaasha BBC
aragti guud (L × W × H)
Xogta ku qoran miiska waa tixraac ka beddelid kasta oo aan lagu wargelin doonaa
● qaabeynta aasaasiga ah qaabeynta 〇optional
Codsiyada Main Of Extruder
Dia. of fur
Max. xawaaraha qoqobada
Codsiyada Main Of Accumulator
Model ah madaxa dhinta
Max. mugga of madaxa dhinta
xawaaraha isku duro
Xogta ku qoran miiska yahay tixraac, beddelid kasta oo aan lagu wargelin doonaa
Previous: Mashiinka Gaarka ah ee foosto PC
Next: Afuufa Hollow Large wax taaj oo kale Wasakh
3D Air Naasaha afuufa wax taaj oo kale Machine
Cuntada afuufa Baakada wax taaj oo kale Wasakh